प्रहरीकै सामुन्ने डाक्टरको मानमर्दन, स्वयंसेवाका नाममा सडकमा गुन्डागर्दी – Makalukhabar.com
२०७७ जेष्ठ १५, बिहीबार १३:२९
प्रकाश सपुतको ‘साइँला’ को पहिलो भाग युट्युबमाः के साईंली फर्केलिन् त ? (भिडियाेसहित)
प्रहरीकै सामुन्ने डाक्टरको मानमर्दन, स्वयंसेवाका नाममा सडकमा गुन्डागर्दी
मकालु खबर	 May 17, 2020 मा प्रकाशित 410 0
स्वास्थ्यकर्मीको झोला खोतल्दै हप्की दप्की गर्ने युवा / फाइल फोटो
काठमाडौं । उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा कडाइ गर्ने निहुँमा टोले स्वयंसेवीले कोरोना संक्रमणको जोखिम र नियन्त्रणमा फिल्डमा खटिएका डाक्टरको हुर्मत लिएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो काठमाडौंको नागढुंगामा स्थानीय तहले खटाएका स्वयंसेवीले बागमती प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. नारायण कार्की सवार गाडी खानतलासी गर्दै उनको हुर्मत लिएका हुन् । त्यो पनि प्रहरीकै सामुन्ने ।
चितवन र हेटौँडामा कोरोना भाइरस परीक्षणको किट सकिएपछि डा.कार्की काठमाडौं हिँडे । सहयोगीसहित गाडीमा हिँडेका उनी उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुंगामा करिब १२ बजे आइपुगे । नाकामा सुरक्षाकर्मी देखिए । उनीहरूसँगै उभिएका थिए, युवाका केही हुल । प्रहरीले गाडी रोक्न संकेत गर्‍यो । डा.कार्कीले संकेत गरेकै ठाउँमा गाडी रोके । तर, चेकिङ गर्न प्रहरी आएन । हुल बाँधेर उभिएका युवा गाडीनजिक आए । गाडीको झ्याल खोलेर बसेका कार्की भित्रै थिए ।
एक युवाले निर्देशन शैलीमा गाडीको पास देखाउन भने । कार्कीले पास देखाए । युवाले पासमा रहेको मोबाइल अन गरे । भिडियो बटन थिचे । भिडियोलाई फेसबुकको लाइभ मुडमा लगे । अनि कार्कीसँग सोधपुछ गर्न थाले । हुलहुज्जतसहित उत्रिएका युवाका गतिविधिसामु कार्की निरीह बने । खुरुखुरु प्रश्नको जवाफ दिँदै गए ।
केही फेला नपरेपछि युवाले डाक्टरको नाम सोधे । काम गर्ने संस्थाको परिचय मागे । कार्यरत संस्थाको ओहोदा सोधे । उनले सबै प्रश्नको जवाफ दिँदै गए, नयाँ पत्रिकामा समाचार छ । कमजोरी पत्ता लगाउन नसकेर दिक्क भएका युवाको ध्यान अचानक डाक्टरको मुखमा पुग्यो । किनकि उनको मुखमा मास्क थिएन । यही कमजोरीलाई प्रयोग गरेर युवाले डा.कार्कीलाई दिनुसम्म दुःख दिए ।
यता गृह मन्त्रालय प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले नागढुंगा नाका हुँदै लुकीछिपी काठमाडौं आउनेको सूचना पटक–पटक आएपछि त्यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिबाट आग्रह बताए । ‘सहजीकरण गर्न हामीले स्थानीय तहलाई भनेकै हौँ,’ उनले भने, ‘तर, खानतलासीमै उत्रन भनेका छैनौँ । खानतलास गर्न, सोधपुछ गर्न प्रहरीबाहेक कसैलाई पनि अधिकार छैन ।’
‘कोही व्यक्ति त्यस्ता गतिविधिमा उत्रिए त्यो गैरकानुनी हो । नागढुंगामा त्यस्ता केही अवाञ्छित गतिविधि भएको सूचना आएको छ । घटना विवरण बुझ्ने काम हुँदै छ । दोषी देखिए कानुनी कारबाही हुनेछ, उनले भने ।
‘ती महिलालाई शिक्षण अस्पताल आउनु अगावै कोरोना भएको हुनसक्छ’
‘अपरिचित देखे तुरुन्त सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गराउन अनुरोध’
बाँकेमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा, अत्यावश्यक सेवा भने खुल्ला
‘बर्तमान सरकारकै कारण गणतन्त्र खतरामा छ’ डा. कोइराला